Sebenzisa itoliki yoguqulelo kwangoko: Iifowuni zefowuni okanye izixhobo ukuthenga i-Emulator.online line 🥇
Xa sikhenketha phesheya, eyona ngxaki inkulu alithandabuzeki ukuba lulwimi lwasemzini: nangona ngoku wonke umntu ethetha isiNgesi esincinci, singakufumana kunzima ukuzenza siqondwe ngabemi bendawo, ngakumbi ukuba bathetha olwabo kuphela. ulwimi. Ngethamsanqa, iteknoloji yokuguqulela ihambe indlela ende kule minyaka idlulileyo kwaye kunokwenzeka, ngezixhobo ezincinci eziphathwayo, fumana inguqulelo yangoko nangoko ngelixa siqala ingxoxo.
Kwesi sikhokelo siza kukubonisa ngenene abona baguquleli baphambili ukuba ungathenga kwi-Intanethi ukuze uthethe kwaye uguqulele kulwimi lwasekhaya kwaye ngokuchaseneyo umamele iingxoxo zabangeneleli bethu kwaye uqonde igama ngalinye elithethiweyo. Ezi zixhobo ziluncedo kakhulu kwaye ziyasebenza kwaye zinokusetyenziselwa naluphi na uhambo lwaphesheya.
OKUFUNDILEYO FUNDA: Esona sichazi-magama sithetha iilwimi ezininzi kunye nesiguquleli se-Android kunye ne-iPhone
Abaguquleli abagqwesileyo kwangoko
Abaguquleli kwangoko banezinto ezahlukeneyo ezisebenzayo kwaye, ngaphambi kokuthenga imodeli yokuqala esiyifumana kwangoko, kusoloko kufanelekile ukujonga iimpawu ezi zixhobo kufuneka zibe nazo, ke khetha kuphela iimodeli ezilungele iimfuno zethu. iimfuno zokuguqula.
Itoliki yendima yexesha lokwenyani
Umguquli okhawulezileyo olungileyo kufuneka abe nezi mpawu zilandelayo ukuze achazwe kwaye abenakho ukuphendula kuzo zonke iimfuno zethu zokuguqulela:
Iilwimi ezixhaswayo-Enye yeeparameter ezibaluleke kakhulu, kuba baninzi abaguquleli abakhawulezileyo abafumanekayo kwaye kufuneka sikhethe enye exhasa ubuncinci ezona lwimi zaziwayo okanye iilwimi esinokuba nazo iingxaki xa siphesheya. Ke masiqinisekise ukuba ixhasa isiNgesi, iSpanish, isiFrentshi, isiRashiya, isiTshayina, isiJapan, isiHindi nesiPhuthukezi.
Iindlela zokuguqulelaUkongeza kwiilwimi ezixhaswayo, masiqiniseke ukuba umguquli okhethiweyo okhawulezileyo uneendlela ezahlukeneyo zokuguqulela. Olona tshintsho lulula kukuguqulela umgca (ukusuka kulwimi A ukuya kulwimi B okanye ngolunye uhlobo), ngelixa iimodeli ezibiza kakhulu nezisezingeni eliphambili zivumela ukuguqulelwa kwangoko kwiilwimi ezimbini ezahlukeneyo, ngaphandle kokucinezela amaqhosha okanye ukumisela iilwimi ngaphambi kwengxoxo (inguqulelo eya kumacala amabini) .
Conectividad: Ukuze ukwazi ukuguqula ngokufanelekileyo nangokukhawuleza, uninzi lwabaguquleli kwangoko kufuneka ludityaniswe kwi-Intanethi, ukuze uxhamle kwiinjini zoguqulelo ezikwi-intanethi kunye nobukrelekrele bokuzenzela obuveliswe ngabavelisi bezi zixhobo. Iimodeli ezilula kakhulu zidibanisa ngeBluetooth kwi-smartphone (ekufuneka ihlale iqhagamshelwe kwi-Intanethi), ngelixa ezinye iimodeli ezibiza kakhulu zineWi-Fi, iBluetooth kunye neSIM khadi ezinikeleyo ukuze ikwazi ukudibanisa ngokuzimeleyo kuyo nayiphi na imeko.
Ukuzimela: njengoko ezi zizixhobo eziphathwayo, zinebhetri yangaphakathi ye-lithium-ion, ekwaziyo ukuqinisekisa ubuncinci iiyure ezi-5-6 ngaphambi kokukhutshelwa ngokusisigxina. Kule meko, kubalulekile ukuba usoloko uphethe itshaja ehambelanayo ye-USB okanye, kuba sikumazwe aphesheya, kunye nebhanki yamandla enobungakanani oboneleyo (njengalezo zibonwe kwisikhokelo Ungayigcina njani i-smartphone yakho ihlala ihlawuliswa).
Ubukhulu kunye nokumilaUbume kunye nobungakanani bomguquleli bukwabaluleke kakhulu, njengoko umguquleli okhawulezileyo kufanele ukuba kubelula ukubamba kwaye kube lula nokuvula nokucima xa kufuneka njalo. Nangona izixhobo ezahlukeneyo ezinemilo eyahlukeneyo zikhona, sihlala sizama ukujolisa kwiimodeli ezinobume be-ergonomic (ngohlobo lwerekhoda).
Ukuba izixhobo ziyazihlonipha ezi mpawu, sinokujolisa kuzo ngamehlo ethu avalekile, siqinisekile ngesiphumo esihle.
Itoliki ezinokutolika onokuzithenga
Emva kokubona ukusebenza ekufuneka kuguqulwe kwangoko ngabaguquleli, masibone ngokudibeneyo ukuba zeziphi izixhobo esinokuzithenga kwiAmazon, ebezisoloko ziyenye yeebenchmark ze-e-commerce ye-Intanethi ngenxa yesiqinisekiso sayo esipheleleyo, esithetha ngaso kwisikhokelo . Isiqinisekiso saseAmazon sibuyisela imali echithwe kwisithuba seminyaka emibini.
Phakathi kwabaguquleli abancinci nabancinci abancinci esifumana UTravis Touch Go, Iyafumaneka kwiAmazon engaphantsi kwe- € 200.
Esi sixhobo sinokuguqula iilwimi ezili-155 kwimowudi eya kumacala amabini (kunye neenguqulelo ezinokufunyanwa kwisithuba esingaphantsi komzuzwana), ine-Wi-Fi, iBluetooth kunye nenethiwekhi yedatha (nge-eSIM) kwaye, yakuba iqhagamshelwe kwi-Intanethi, isebenzisa ubukrelekrele obuphambili. Uhlobo lwamafu olungelolwethu ukusinceda kwiinguqulelo ngexesha lokwenyani. Lo mguquleli ukhatshwa siscreen sokuchukumisa esingu-2,4-intshi kunye namaqhosha omsebenzi amaninzi ukukhetha ulwimi oza kuguqulela kulo.
Omnye umguquleli olungileyo kwangoko esinokuthi simqwalasele ngu Umguquleli weSmart Vormor, Iyafumaneka kwiAmazon engaphantsi kwe- € 250.
Esi sixhobo sine-ergonomic kunye ne-compact shape, umbala we-2.4-intshi yesikrini kunye nekhamera yangemuva, ukuze sikwazi ukubeka ifreyimu kunye nokuguqulela iiposta kunye nemiyalezo esinokuyifumana kwizitrato zelizwe langaphandle. Enkosi kunxibelelwano olungenazingcingo, ivumela ukuguqulelwa kwangoko kunye nokuya kumacala amabini ukuya kwiilwimi ezili-105, ngokuchaneka okuqinisekileyo.
Ukuba kwelinye icala sifuna abaguquleli abaphambili abagcinelwe abathengi beshishini, isixhobo sokuqala ekufuneka siqwalasele I-Basque Mini 2, Iyafumaneka kwiAmazon engaphantsi kwe- € 300.
Uyilo lusikhumbuza isizukulwana esidlulileyo i-Apple iPod Minis, kunye nokuphatheka ngokulula, iza necala elifanelekileyo, ukuze uhlale usithatha nathi ngaphandle koloyiko lomonakalo okanye ilahleko. Njengomguquleli, ixhasa ukuya kuthi ga kwiilwimi ezingama-50, ibonelela ngemowudi yokuguqulela kumacala amabini kwaye inokunxibelelana nayo nayiphi na inethiwekhi yedatha ephathekayo simahla, naphina emhlabeni (enkosi kwizivumelwano zokuhambahamba komenzi, eziqinisekisa ukufikelela ngeLTE).
Ukuba, ngokuchaseneyo, sikhangela isixhobo esidibeneyo nesisebenzayo sokuguqulela esifana neefowuni, sinokujonga kwimveliso ephezulu. WT2 Ukongeza, Iyafumaneka kwiAmazon engaphantsi kwe- € 200.
Ezi ntloko zentloko zikhumbuza ii-Apple AirPods kodwa zisebenza njengabaguquleli abajikelezayo kunye nakwindalo iphela, kufakwe isicelo (ukuba sifakwe kwisixhobo sethu esiphathwayo). Nje ukuba uqhagamshele kwinkqubo yokuguqulela, konke okufuneka ukwenze kukudlulisa iselfowuni kumlamli wethu kwaye uqalise ukuthetha nesinye isiphatho: singathetha ngolwimi lwethu, omnye umntu uya kusiqonda ngokuqinisekileyo, kwaye sinokuqonda yonke into. uthi. Umguquleli omangalisayo ophathwayo uguqulela ukuya kwiilwimi ezingama-40 ezahlukileyo kunye nama-aksenti angama-93, ukuze wazi iingxoxo zommandla othile welizwe elikhethiweyo.
Sebenzisa i-smartphone yakho njengetoliki yexesha lokwenyani
Ngaphandle kokuthenga nantoni na, ungasebenzisa kwakhona Itoliki kaGoogle yokuguqulela imo yokwenene ngubani ixesha futhi idityaniswe noMncedisi kaGoogle ekhoyo ngoku kwizixhobo ze-Android neze-iPhone. Inguqulelo ixhasa iilwimi ezingama-44 zokukhetha, kubandakanya isiArabhu, isiNgesi, isiFrentshi, isiJamani, isiGrike, isiTaliyane, isiJapan, isiPhuthukezi, iSpanish nezinye ezininzi. Nje ukuba imo yokutolika yenziwe isebenze, ungathetha nje ngesixhobo ukuze inguqulelo iboniswe kwiscreen kwaye ufunde ngokuvakalayo nguMncedisi kaGoogle, ukuze uncokole nabantu abathetha iilwimi ezahlukeneyo.
Uyenza njani imo yokutolika yoMncedisi kaGoogle
Kwifowuni yakho, vula uMncedisi kaGoogle ngokuthi "Ok Google" okanye ngokuvula usetyenziso lukaGoogle kwaye ucofe iqhosha lemakrofoni kwibar yokukhangela. Ukuqala imo yokutolika, yithi "Molo kuGoogle, yiba yitoliki yam yaseRussia"okanye ulwimi olufunayo. Ungasebenzisa neminye imiyalelo yelizwi njenge:"Ndincede ndithethe iSpanish"okanye"Ukutolika ukusuka kwisiRomania ukuya kwisiDatshi"Okanye ngokulula:"Itoliki yesiFrentshi"OKANYE"Sebenzisa imo yokutolika".
Iwizard iya kukubuza ukuba ucofe iqhosha lemakrofoni kwaye uqalise ukuthetha. Kwisikrini unokufunda kwangoko uguqulo kunye nothotho lweempendulo kulwimi oluguqulelweyo ukuze uqhubeke nokuncokola ngokutyibilikayo.
Kude kube yiminyaka embalwa edlulileyo, abaguquleli bendalo iphela babeyinyani yesayensi, ngelixa namhlanje zithengwa ngokulula eAmazon kwaye zisebenza kakuhle, zisinceda ukuba soyise umqobo wolwimi xa sisuka phesheya.
Ngalo lonke ixesha kumxholo wabaguquleli, sicebisa ukuba ufunde nesikhokelo sethu Umsebenzisa kanjani umguquleli welizwi kwaye uguqulele ngaxeshanye.
Ngaba sijonga umguquleli weendlela ezimbini weSkype? Sinokusebenzisa umguquli owakhelweyo, njengoko kubonisiwe kwisikhokelo sethu. Isiguquli seSkype njengetoliki ezenzekelayo yeaudio kwilizwi nakwividiyo.
Uyidlala njani imidlalo yePS5 ngaphandle kwekhonsoli
Izixhobo ezi-7 eziyimfuneko ekusebenzeni kakuhle
Zininzi iindlela zokusebenzisa iMac Mini njengePC, ibhokisi yeTV kunye neNAS
Injani iPS5? Uhlalutyo nesikhokelo sePlaystation esitsha
I-Huawei vs Xiaomi: ngubani owenza ezona smartphones zibalaseleyo?
Ezona khompyuter zibalaseleyo kuzo zonke zithatha indawo encinci
Uyikhetha njani ikhompyuter yakho esikolweni okanye kwikholeji
Iiglasi ezinesandi seBluetooth, iiglasi zelanga kwaye hayi
Ezona PC ze desktop zihle ukuthenga ngaphandle kwebhokisi
Itshaja yelaptop ayisebenzi: ungayilungisa njani?
Izithethi ezingcono kunye nezithethi kunye noMncedisi kaGoogle